Fonosana plastika, fitoeran-aliminioma, fantsom-bary vita amin'ny fantsom-bary - HEYPACK
Tavoahangy mitsoka PET
Tavoahangy mpanasitrana zavona
Tavoahangy paompy PET
Tavoahangy PET misy satrony
Tavoahangy fikarakarana shampo sy vatana
shampoo sy tavoahangy fandroana
zaza & mon
Fantsona fonosana kosmetika
fantsona miaraka amin'ny mpangataka
Tavoahangy tsy misy vy sy tavoahangy fanosotra akrilika
Siny plastika & syringe hatsaran-tarehy
Tavoara PET / PP / PE
Tavoahangy ho an'ny tavoahangy
Orinasa tsy miankina izahay izay mifantoka amin'ny famokarana sy fivarotana karazana fonosana sy kaontenera rehetra. Nandritra izay 15 taona lasa izay dia nanolotra serivisy fonosana ho an'ny orinasa bebe kokoa izahay. Izahay dia manolo-tena amin'ny fanatsarana ny haavon'ny endrika orinasa.
Manonofinofy izahay ny ho tonga mpamatsy kaontenera fonosana eran-tany, ary manolotra serivisy ho an'ny marika 10000 manerantany. Manana famolavolana vokatra matanjaka sy mahaleo tena izahay, ekipa fampandrosoana ny vokatra.
Fonosana sy fitoeran-javatra
Nanomboka tamin'ny 2003
Tavoahangy, Tube, Jar
Tavoahangy Hdpe / PP
Fandroana sy volo
Tube Aluminium / Plastika
Roll On / Deodorant tavoahangy
Tavoahangy / tavoahangy
Fahasalamana sy tokantrano
Anisan'izany ny fanomanana fitaovana vaovao ,. Tavoahangy miloko manao fanatanterahana, tavoahangy & fampidirana tavoahangy. Fanariana ambonin-tany toy ny fanapoahana herinaratra, .Sincincare. Voahangy, sokitra. Drafitra fanontana toa ny fanamarihana, fanontana Ofiset, fanontana lamba, fanoratana volamena / volafotsy / Rose sns.
ATAOVANA FIVORIANA AMIN'NY 2003
Fantaro ny orinasa misy anay
Fanariana sy fanaovana pirinty ny etona
Fanontana efijery loko 1-4, akanjo ho an'ny fampahalalana momba ny vokatra, hazo tsotra
Volafotsy, volamena, Rose volamena, akanjo fanosotra volomparasy volomparasy ho an'ny sary famantarana
Fitaovana marika fotsy, mangarahara, miloko ho an'ny zavamaniry, olona.
Matte mainty, fotsy matevina, na loko hafa ho an'ny prod kalitao avo lenta
Tavoahangy misy fanontana marika
Tavoahangy hafa loko
Tavoahangy famafazana mangarahara
tavoahangy plastika valve plastika
Tavoahangy serume tarehy
Romm 1606, Block A, Shuguang international Building No. 300 Shangcheng Avenue, Futian Street, Yiwu City, Faritanin'i Zhejiang.